Murti Ejjennoo fi Kutannoolee hirmaattota Kora Gamtaa ABO Amerika Kaabaa bara 2019 Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMurti Ejjennoo fi Kutannoolee hirmaattota Kora Gamtaa ABO Amerika Kaabaa bara 2019
Nuti miseensootnii Adda Bilisummaa Oromoo Kutaalee Kanadaa fi USA kora keenya kan bara 2019 magaalaa Minneapolis, Minnesota keessatti geggeeffanne. Korri keenya bara kanaa haala adda taheen marii dhimmoota murteessoo ta’an irratti akka marihannu kan taasisee fi kan adda godhes baroota dheeraa booda dhaabini keenya Magaala Finfinnee, Oromia keessatti waajjira banatee haala hojjetaa jiru keessatti tahuu isaati. Qabsoo hadhaawaa bara dheera booda biyyatti keessatti aanjaa xiqqoo uumaameen Qabsoon Bilisummaa Oromoo ABOn durfamu ifatti Ummata isaa keessatti deebi’ee akka socho’u taasifamee jira. Haa ta’uti qabsoo karaa nagaa geggeffatuuf ABOn mootummaa Itophiya waliin wal ta’insa godhuun hojiin jalqabame akka abdatame ta’u dhabuun mumullataa dhufuun ifaa dha. Kanaaf, marii fardii Kora kana irratti geggeffanne irratti hundaa’uun haaloota ulfaatoo yeroo amma keessa jiramu kana irra aanuuf murtii ejjennoo fi kutanoolee asiin gadi dabarfanne.
Qabsoon Bilisummaa Ummata Oromoo ABOn durfamu guutummaa Oromiya keessatti ummata Oromoo hirmaachisuun galii bilisummaa ummaticha dhugoomsuuf tattaffi inni godhu bifa hundaan gargaaruf murteeffanne.
Adeemsa falmaanna mirga ummata Oromo eegisisuu keessatti haalli ABO qabsoo hidhannootti seensise fooyya’insa agarsiiseen haala aanjawa ta’ee mullate keessatti qabsoo karaa nagaa geggeffatuuf tattaaffi ABOn godhu guutummaatti ni deggerra.
Mootummaan Itoophiyaa waligaltee ABO waliin taasisee fi waadaa seene akka kabaju gad jabeessinee gaafanna.
Barbaachisummaa nagaa fi tasgabbi gutummaa biyyaa keessatti eegisuuf godhamu itti amanaa, maqaa nagaa fi tasgabbi eegsisuun ajjechaa fi saamicha humnooti mootummaan raawwatamaa jiru ni balaaleffanna.
Hiree Murteeffannaan Saba tokkoo bu’uura Dimokrasi ta’uun seera Idil-Adunya keessattu kan heerame waan ta’eef qabsoo Hiree murteeffannaa ummatootni cunqurfamoo gaafatan mootumma Itophiyas ta’ee humnootni siyaasaa biyyatti martinu akka kabajan gaafanna.
Hidhaa fi Ajechaan maqaa Adda Bilisummaa Oromoo deggeruun sababeeffatamee Oromiya keessatti caasaa mootummaa Itophiyatiin raawwataa jiruu hatattamaan akka dhaabatu akeekkachiisna.
Akeeka Qabsoo Bilisummaa Oromoo bakkaan ga’uu keessatti tokkummaan qabsaa’otaa barbaachisa waan ta’eef, Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo akeeka wal fakkaata qaban hatattamaan walitti dhufuun Danta Ummata Oromoo akka tiksan gaafanna.
Humnootiin Siyaasaa Oromoos ta’ee Itophiya keessa sosso’an kanneeen olola Jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Hooggana isaa akkasumas qabsa’ota haqaa irratti oofan akka dhaaban akeekkachiisna.
Addi Bilisummaa Oromoo ummata Oromoo giddu-galeessa godhatee jaarmiya qabso haqaa, nagaa fi demokrasiif qabsa’u ta’uu hubannaa keessa galchuun Qabsoon Bilisummaa Oromoo ABOn durfamu sirna siyaasa cunqursaa ta’e irratti malee, sabaa fi gartuu kam irrattu kan hin xiyyeeffatin waan ta’eef Ummatootni Itophiya demokraasi, nagaa fi haqattti amanan martinuu Qabsoo Ummata Oromoo bira akka dhaabbatan dhaammanna.
Ummatni Oromoo hundi yeroo ammaa kanaa balaa tokkummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaammate hubachuun ilaalchaa siyaasaa fi miseensumma jaarmiyaatiin utuu wal hin daangeessiin akka tokkummaan dhaabbatu waamicha goona.
Mootummaan Itophiya Hoogganoota, Miseensotaa fi Deggertoota ABO maqaa siyaasaatiin bakkoota gara garaatti hidhee dararaa jiru hatattamaan hal-duree tokko malee akka gadi lakkisu gaafanna.
Nagaa fi Tasgabbii uumuu maqaa jedhuun Abbootiin Gadaa fi Koreen Teknikaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) mooraatti dachaasun kabajaa isaaniif malun qubachiisuuf waada saba Oromoo fulduratti seenan kabajani miidhaa hanga ammatti qaqqabeefis qaama iti gaafatamummaa fudhatu ifa gochuun akka waada isaani eegan gad jabeessinee dhaammanna.
Mootummaan Itophiiyaa bulchiinsa Command Post jedhamu labsuun miseensotni Raayya Ittisa Biyyaa gochaa faashistummaa Dhiha Oromiya, Gujii, Booranaa fi ammammoo Ummata Sidaamaa irratti gara jabinaan ajjeechaa akka raawwataniif sirna diriirse hatattamaan akka kaasu gaafanna.
Siiyaasa wal-xaxaa Itophiyaa keessatti deemaa jiruuf furmaata waaraa fiduu irratti ga’een Adda Bilisumma Oromoo isaa olaana ta’uun beekamee dabni shiraa ABO moggeessuuf gama mootummaanis ta’e humnoota siyaasaa faalla ABO dhaabbataniin mirga Oromoon dhiigaan gonfate doomsuuf carraaqqin taasifamaa jiru hatattamaan dhaabbatee maree egeree biyya sanii irratti taasifamu hunda irratti ABO giddu-galeessatti (center stage) fiduun akka hirmaachisu qaban jabeessinee hubachiifna.
Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) kallachaa Qabsoo Bilisummaa Ummata Oromoo fi jaarmiyaa siyasaa Ummaticha isa angafaa, tokkichaa fi kan hin qoodamne (indivisible) fi sochii guutummaa biyyoolessaa Oromiya (Pan Oromo movement) qindeessuun siidaa seenaa ta’ee jiraachuun utuu beekamu kanneen maqaa kana baayyisuun (duplicate) afaanfaajji Ummata Oromoo keessatti oofuuf tattaafatan yakka xurii seenaa kana irra hatattamaan akka dhaabbatan akeekkachiisna.
Injifanno Ummta Oromoof!
Kora Gamataa ABO Amerikaa Kaabaa
Hagayya 8, 2019